iza kutshintsha njani ICO Market ngo 2018? - Blockchain News
2017 wabona ukukhula iziqhushumbisi kwindawo ekukho inani ICOs, njengendlela revolution ukutsala utyalo-mali. Kulo nyaka 234 iiprojekthi ICO ukhulise ngaphezu $3.7 billion, ne nxalenye enkulu kule mali iyonke ukuba ezivela Meyi ukuya ku-Oktobha, ngokutsho Coinschedule. Iingcali zikholelwa ukuba kunyaka ozayo, kunjalo, oku kuya kuncipha kunye nemarike ICO uya kujongana ekucutheni kakhulu and restructuring.
Ngokutsho ku Jerry brito, UMlawuli oLawulayo lombutho nzuzo Coin-Centre, oorhulumente uya kwandisa ukulawula yokuthengisa ithokheni. Lo nyaka i US Securities and Exchange Commission (sec) wathi iinkozo virtual okanye iimpawu ezifundiswa okanye wathengisa babe izibambiso. Ukuba ke izibambiso, ukunikezwa kunye nokuthengiswa yezi ngqekembe virtual okanye imiqondiso kwi ICO kuxhomekeke izibambiso imithetho yaseburhulumenteni. Ngale ndlela, i Ima bafaka namacala scam ze-non ukuthotyelwa komthetho nxamnye ngabaququzeleli eziliqela ICO. Brito ucinga ukuba amanye amazwe, kulo ukuba athathe amanyathelo anti-umkhonyovu, liya kulandela umzekelo US.
Imfuneko kwiintengiso umqondiso ukuthobela imithetho umzuzwana, kuhlanganiswa ukutyala’ umnqweno for ukwethemba, ingakukubetha intsingiselo entsha. in 2018, siza kubona ukuvela kumaqonga ngomsondezo zeziliphu ezintsha eziya kufaneleka ngcono wemiqondiso phambi kokuba ukuba bavunyelwe ukuba kuthengiswa, yaye iya kunceda abatyali kwenza izigwebo ngcono ngabo.
Brito uprofetha ukuba ekuqaleni, la maqonga uya kuvulelwa kubatyali accredited kuphela.
ke, njengoko professionalizes kushishino, ukuze abone ukuba kwiqamza ICO kuqhume. Inyaniso, nokuthoba kungabonisa ukuba kukho maqhinga nje ezimbalwa. Njengoko imodeli entsha mali, ICOs ulapha ukuze uhlale.
Oliver Bussmann, ngumseki kunye neqabane ekulawuleni e Bussmann Advisory, umongameli hayi-i-nzuzo Crypto Valley Association kunye bangaphambili iqela CIO kwaye ngumlawuli kwi Swiss zemali ephethe iUBS, ukukholelwa ukuba ihlabathi ICOs uya uqole ngakumbi 2018 njengoko abadlali ezininzi zemveli ukuzibandakanya. Nje ngeziphumo, baya imali amava abo Ipo kunye nobuchule ukuphuhlisa kwimarike entsha kwaye yonke ishishini unamathele ehlelekile ngcono kunye nobungcali ngakumbi umfuziselo mali ukutsala.
Kwezi nyanga 12-18 elandelayo, Ndiya kuya kuba iimpawu ICO balindele, njengokwakha incwadi, intengiso, uvavanyo sokuqalisa, kwaye nangokunjalo. Njengokuba sele iqalile ukubona, kuya kuba nzima ukufumana inkxaso-mali nje ngasemva iphepha elimhlophe. Batyali-mali ziya kufuna izicwangciso isandi zoshishino kunye namanqanaba aphezulu elubala.
Intloko yesebe lezobugcisa Ripples, Stephan uTomas uyavumelana kwiimpikiswano ngasentla, ngokwendlela post yakhe Quora (kwiqonga loluntu ukwabelana ngolwazi). Ubona ezininzi ukufana phakathi yomtshangatshangiso ICO namhlanje kunye altcoin otshangatshangiswayo 2014. Ngale ndlela, hype yokuqala iya kunika indlela eya ICO esengqiqweni ngakumbi kwiza-; ICOs ezininzi kuya kufuneka batshintshe indlela yabo ukutsala utyalo-mali. Mark Lurie ikholelwa ukuba kunyaka ozayo kuya kubakho okuninzi mali kumaziko kuya ukuba bonke yiya iiprojekthi ephezulu umgangatho.
Kuya kubakho shakeout in ICOs kunye ukubalekela umgangatho. Kuya kubakho ukwanda ICOs apho embalwa iza kuhamba umhlola. Kuya kubakho okuninzi mali yamaziko bonke baya kuya iiprojekthi ephezulu umgangatho. Yiloo nto eyenzeka ngexesha lokudodobala zemali kunye mali kunye nokukhula kwemijikelo ukulingana, kakhulu. iinkampani ezininzi wayengenakukwazi ukukhulisa naziphi na iimali, kodwa abo eyayinako ukukhuphula imali wakwenza oko zoqingqo ophezulu.
in 2018, bethutha bakrelekrele ngakwicala iinkampani ekwenzeni ICOs ezinxulumene-Bitcoin iimveliso ziya kuba izilumle uluntu kunye namajelo ngaphandle “imali digital” concept, nemibiko Wired. Yinto isikweko ukuba ayisekho iyavakala, kwaye kuya endleleni yengqondo yethu efanelekileyo iteknoloji entsha Kubonakala ngathi imali kodwa nyani. Kodwa nxaxheba ICO kuya kufuneka ukuba enze iinzame ezinkulu ukutshintsha umfanekiso shishino. William Mougayar, a Abatyali Canadian ezaziwayo-kakuhle, entrepreneur, kunye nombhali weencwadi ezininzi blockchain, ithi ukuba imarike ICO zangoku wemiqondiso ukutsala abadlali ephosakeleyo.
Hayi nje Token 1.0 etsala iintlobo ephosakeleyo lweeprojekthi, kodwa ke kwakhona etsala iindidi ephosakeleyo yokuba abantu babone inzuzo ezingenelelayo ukuba ukujikeleza ikharensi, ukhulisa esihlweleni ithembisa inyanga, nge lokuphendula kangako akungebalelwe. Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke, kufuneka kuqwalaselwe kwakhona kwaye asebenzise ezintsha ezingundoqo blockchain. Emva koko kufuneka bazihlole ithokheni ukusebenza ngokunzulu, ngaphandle kuka-ababeqondisa samandla ithokheni. Kufuneka ukubeka blockchain emva equation, hayi ithokheni.
Vitalik Buterin uthi malunga uhlobo olutsha zeziliphu ngokunjalo. Uyaqiniseka ukuba 2018-2019 uhlobo entsha zeziliphu, ICO 2.0, kuya kuvela for market ICO ukhulile.
Kukho amacebiso amahle, kukho ezininzi iimbono ezoyikekayo, kwaye kukho ezininzi kakhulu, imibono emibi kakhulu, beliqela maqhinga ambalwa ngokunjalo. I Silindele ukuba iimpawu 2.0 kunye iintlobo zezinto ukuba abantu baqale ukwakha ku 2018 yaye 2019 ngeke, nje, lisemgangathweni kakhulu eliphezulu. Ingakumbi xa siqala ukubona ukuba yintoni na iziphumo lencinibakazi yokuqala iimpawu zibe kwixesha eliphakathi-to-elide.
Inguquko entsha ye Bitcoin Core ixhasa ngokupheleleyo SegWit-iidilesi
Post Previous:Blockchain News January 7 2018
Post Next:About ICO: Ngubani baqokelela imali ezininzi ngexesha yokuthengisa ithokheni